Dakhliga Dawlada Hoose Iyo Dayaca Caasimada! (Qaybtii 1aad)..By Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi. |
Dakhliga Dawlada Hoose Iyo Dayaca Caasimada! (Qaybtii 1aad)..By Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi.
Qormadeenan kooban, waa mid aynu ugu tallo galnay inaynu ku iftiimino dakhliga soo gala golaha deegaanka caasimada hargeysa iyo dayaca baahsan ee dhex yaala , taas ugu mihiimsan yihiin, qorsha la’aanta magaalada, lunsashada dhulkii danta guud ahaa, tacadiga shaqaalaha haysta, hanaanka shaqo ee masuuliyiinta iyo adeeg la’aanta bulshada.
Sida aynu wada ogsoonahay magaalada hargeysa waxay ku socotaa xawli aad u sareeya waxaana ku nool bulshad ugu badan wadanka, nasiib daradase ku gadaaman waxay noqotay waxa kala horeeya horumarka aasaasiga ah ee looga baahnaa inuu barbar socdo kobaca magaalada. Waxba yaan ku fogaan faalada oo waad ka dharagsan tihiin jiho la’aanta ku habsatay caasimada.
Meelaha ugu xooga badan ee dawlada hoose dakhligu ka
soo galo ayaa waxay yihiin kuwan soo socda oo ay dhammaan kordhiyeen boqolkiiba boqol intii hore loo qaadi jiray, iyadoo adeegiina uu hoos u dhacay boqolkiiba boqol in ka badan. Marka laga yimaado Cashuurta tooska ah ee ay qaadaana waxa u weheliya ama u dheer kabka ay dawlada dhexe siiso dawlada hoose iyo mashruuca loo yaqaan (JPLG).
1. cashuurta jeexista dhulka
Cashuurta jeexistu waa mida laga qaado qofka guri dhisanaya ama dhul banaan ahaa oo uu lahaa haddii uu seesayo amaba shaqo uun uu ka qabanayo, sida cashuuraha kale u kala leeyihiin heerar ama darajo, cashuurta jeexistu uma laha darajo balse waa qiimo go’an. Tusaale ahaan haddii uu qofku dhisanayo fooq iyo haddii uu dhisanayo makhsin amaba dhul banaan seesanayo waxa laga wada qaadayaa lacag isku mid ah. Cashuurtani waxay safka hore kaga jirtaa meelaha sida aadka ah ugu soo hoyata, sidoo kale waxay calanka u sidaa meelaha markiiba golaha deegaankan imika joogaa ay kordhiyeen boqolkiiba boqol 100%. Waxay golihii deegaanka ee iyaga ka horeeyay qaadi jireen lacag ah $ 100 doollar (boqol Doollar) balse golahan deegaanka ee uu gadhwadaanka ka yahay Maayir Soltelco ,waxay markiiba ka dhigeen
$ 200 Doollar (laba Boqol oo Doollar). Haddii aynu intaas fahan guud ka qaadanay qiimaha ay markii hore cashuurta jeexistu ahayd iyo qiimaha ay imika tahayba, bal aynu qiimayno dakhli ahaan intee in leeg ayaa sanadkii ka soo xaroon kara inagoo ka duulayna korodhka dhismaha caasimadu sida uu yahay.
Haddii aynu qiyaas ahaan isugu soo celcelino in magaalada hargeysa maalintii laga yagleelo ama laga jeexaba 100 guri oo aynu qaadano tirada ugu yar. Iyadoo aynu ognahay xawliga dhismaha caasimadu ku socdo. waxaynu qiyaas ahaan u soo qaadanay tiradaa yar marka loo eego caasimada taaso oo ah 100 guri oo kali ah maalintii, waxaynu ku dhufanaynaa lacagta cashuurta jeexista oo ah $ 200 oo doolar waxaanay inoo noqotay maalintii inay ka soo xarooto lacag dhan $ 20,000 oo doolar ( Labaatan kun oo doolar) waxaynu intaas ku dhufanay tirada sanadka oo aynu ka jarnay fasaxyada kana soo qaadanay. 300 maalmood maadaama aynu maalintii soo saarnay lacag dhan labaatan kun , waxaana sanadkii inoo soo baxay lacag dhan $ 6,000,000 ( Lix Milyan Oo Doolar)
2 .Cashuurta Kala Wareeiinta
Cashuurta kala wareejintu waa cashuurta la qaado qofku markuu iibsado guri ama dhul banaan. Si la mid ah tii hore xadigii la qaadi jiray waxa laga kordhiyay boqolkiiba boqol waxaana golihii deegaanka ee hore qaadi jireen boqolkiiba hal , imikana waxa laga dhigay boqolkiiba Laba. Haddaba inagoo ka duulayna xawliga kala iibsiga dhulka ee caasimada ka jira, markaynu isku soo celino qiimayasha kala duwan ee la siiso daafaha magaalada waxaynu qaadanaynaa in qiimaha dhexe yahay $ 25,000 doolar, haddaba qiimahaas oo lagu dhufto boqolkiiba laba waxa inoo soo baxaysa lacag dhan $ 500, oo doolar halkii qof ee dhul kala wareejisanayaba. Sidaa darteed haddii aynu haysano qiimaha qofkiiba laga qaadayo, haddii maalintii aynu qaadano in ugu yaraan in qaybta kala wareejinta ay soo gaadhaan 50 jago ama dhul oo la kala wareejinayo waxay noqonaysaa. $ 500*50= $25,000 ( Shan Iyo labaatan kun oo doolar) maalintiiba, intaas markaynu ku dhufano sanadkii oo ah 300 maalmood waxay inoo noqonaysaa lacag dhan $ 7,500,000 ( Todoba Milyan Iyo Shan Boqol Oo Kun doolar). Akhriste waxa xusid mudan inaynaan taaban guryihii la kala iibsaday ee la kala wareejinayay dakhliga aynu haysanaana uu yahay uun dhulka oo kaliya.
3. Cashuurta biriliyamka
Cashuurta biriliyamku waa ta la qaado marka dhulka la sharciyaynayo, waxay cashuurahaas ka horeeyay kaga duwan tahay waxay ku jaan go’an tahay cabirka dhulka. Cabirka ugu yar waxa laga qaadaa lacag u dhiganta $ 115 (Boqol iyo shan iyo Toban Doolar) waanay korodhaa mar kasta oo cabirka dhulku kordho. Balse inagu waxay qaadanaynaa cabirka dhexe oo ah $ 230 (Laba Boqol iyo Sodon Doolar). Haddii maalintii la sharciyeeyo dhul dhan 50 jago oo aynu ku dhufano laba boqol iyo sodonka doolar waxay noqonaysaa $ 230*50 = $ 11,500 ( Koob iyo tobankun iyo shan boqol) marka lagu sii dhufto sanadkii oo ah 300 maalmood $ 11,500*300= $ 3,4,50,000 ( Sadex milyan Afar Boqol iyo kontan kun oo doolar).
4. Cashuurta Mulkiyada.
Cashuurta mulkiyadu waa mid la qaado marka la sharciyaynayo guriga ama dhulka iyada oo uu qiimaheedu go’an yahay isla markaana yahay $ 200 (Laba Boqol oo Doolar) haddaba haddii aynu intaas ku dhufano tiradii sharciyaynta jagooyinka oo aynu qaadanay 50 jago maalintii inagoo guraha iska reebnay waxa ay noqonaysaa $ 200*50 = $ 10,000 ( Toban Kun oo doolar) marka aynu ku dhufano sanadkii oo ah 300 maalmood waxa inoo soo baxaysa $ 10,000*300 = $ 3,000,000 ( Sadex milyan oo doolar)
5. Cashuurta Ardiyadaha .
Cashuurta ardiyaduhu waa cashuurta laga qaado gurayaha sanadkiiba hal mar, waxaanay kala leedahay darajooyin tusaale ahaan guriga ugu yar wax laga qaadaa lacag u dhiganta $ 15 ( Shan iyo Toban Doolar) halka qaarna ay ka yhiin lacag u dhiganta $ 65 (Shan Iyo Lixdan Doolar) . sidaas darteed haddii aynu qaadano qiimaha dhex oo ah sodon doolar, isla markaan guryaha hargeysa ee ka soo qaadno tirada dhexe oo ah ilaa 200,000 guri kuna dhufano sodon doolar $ 30*200,000 waxay la mid noqonaysaa sanadkiiba lacag dhan. $ 60,000,000 ( Lixdan Milyan Oo doolar).
6. Cashuurta Maalinlaha ah.
Cashuurta maalintii la guraa hore waxay u ahayd shan boqol oo shilling, halka imika laga dhigay kun shilling. Hadii tirada meheradaha hargeysa ee maalintii laga qaadaa ay yihiin 100,000 ( Boqol kun) oo meheradood waxa soo baxaya lacag u dhiganta 10,000,000 ( Toban Milyan oo Shiling) marka doolar loo badalana maalintii u dhigmaysa $ 1,430 Doolar ( Kun Afar Boqol Iyo Sodon) intaas hadaynu ku dhufan sanadkii oo ah 300 maalmood $ 4,29,000 (Afar boqol Iyo Sagaal labaatan Kun Oo Doolar).
7. Cashuurta Liisamadda ganacsiga
Cashuurta liisamada ganacsigu sida ardiyadaha gurayaha oo kale ayay sanadle yihiin. Noocyada liisamadda la bixiyaana waxay kala duwan yihiin waxaanay u qaybiyeen lix darajo oo ka ugu hooseeyaa yahay 480,000/Sl. Shilling (Afar Boqol Iyo Sideetan Kun). Ka ugu sareeyaana yahay 4,800,000/Sl. Shiling ( Afar Milyan iyo Sideed Boqol Oo Kun) Sl/Shiling. Marka aynu halka dhexe qaadano tirada meheradahana ka soo qaadno 100,000 ( Boqol kun) oo meheradood kuna dhufano 100,000*2,400,000/Sl. Shiling waxa inoo soo baxaysa lacag u dhiganta 240,000,000,000/Sl. Shiling ) intaas markaynu doolar u badalno waxay u dhigmaysaa $ 34,285,714.( Afar Iyo Sodon Milyan, Laba Boqol iyo Shan Iyo Sideetan Kun, Todoba Boqol Iyo Afar Iyo Toban Doolar) sanadkiiba
Celceliska Qiimaha Dhulka
Xadiga Celceliska Cashuurta
Celceliska Guryaha/Dhulka/meheradaha Maalintii
Tirada Guryaha/Meheradaha Sanadkii
Cashuurta Jeexista Dhulka
Cashuurta Kala Wareeiinta
2% = 500
Cashuurta Maalinlaha ah
1000/Sl.Sh=$ 0.15 cent
Wadarta dakhliga guud ee soo xarooda sanadkiii waa $ 114,664,714 ( Boqol Iyo Afar Iyo Toban Milyan , Lix Boqol Afar Lixdan Kun , Dodoba Boqol iyo Afar Toban doolar ) tiradan akhriste soo baxday waxa ka maqan kabkii dawlada dhex iyo tii mashruuca (JPLG) sida oo kale waxa ka maqan dakhliga ka soo xarooda saylada xoolaha iyo labada Kaantarool ee Haleeya Iyo Buurta Kala Jeexan .
Haddaba akhristayaal waxaan idiin dhaafayaa maxaa lacagtaas hargeysa loogu qabtay haddii xataa waddooyinkii la kabkabi kari waayay? La soco qaybo dambe…………………..